Ixabiso leWholeyili laseTshayina leHXGN-12 AC High Voltage Switchgear Fixed Metal Closed Loop Switchgear-shengte abavelisi kunye nabanikezeli |Shengte
Ixabiso leWholesale leHXGN-12 AC High Voltage Switchgear Fixed Metal Closed Loop Switchgear-shengte
H XG N-12 AC high-voltage esisigxina intsimbi evaliweyo iluphu switchgear inqanaba ezintathu AC rated ombane 12KV, frequency 50H Z yangaphakathi high-voltage loop unikezelo lombane kunye nombane terminal.
Ukutshintsha izixhobo.Isebenza kumashishini oshishino kunye nemigodi, iindawo zokuhlala, izakhiwo eziphakamileyo, iipaki zezikolo kunye nezinye iindawo zokuhambisa inkqubo yokufumana kunye nokuhambisa amandla.
I-skeleton yekhabhinethi idityaniswe kunye nemingxuma ye-modulus eyi-20mm, kwaye ukutshintshwa kwebhokisi-ibhokisi-uhlobo lwekhabhinethi esisigxina.
Inxalenye ephezulu yomzimba wekhabhinethi yibhasi, igumbi lesixhobo libekwe phambi kwegumbi lebhasi, lihlulwe ngeplate yensimbi, indawo ephakathi yebhodi yekhabhinethi yindawo yokutshintsha umthwalo, kwaye yahlulwe yibhodi yokufakelwa kunye negumbi lebhasi. .
Icwecwe elingaphezulu lekhabhinethi libonelelwa ngeefestile zokungenisa umoya, kwaye ipleyiti yocango lwangemva kunye necala elisecaleni libonelelwa ngemingxunya yokungenisa umoya.
Ikhabhinethi kunye neepaneli zocango zifafazwe ngepeyinti ye-epoxy polyester powder, ephiliswa kwiqondo lokushisa eliphezulu, kunye nomphezulu omhle kunye nokumelana ne-corrosion enamandla.
Ukufakela umqadi kwikhabhinethi, isahlulo esiphakathi kunye nesitya esisezantsi siphathwa nge-galvanizing.
Emazantsi ekhabhinethi, i-rubber-type-rubber ring ifakwe kwibhodi ephantsi ye-insulating, efanelekileyo kwiintambo zobukhulu obuhlukeneyo.
Ukutshintsha komthwalo, ukutshintshela umhlaba kunye nomnyango wekhabhinethi une-interlock ethembekileyo yomatshini, oye waqonda umsebenzi "wokuthintela amahlanu".
Ucango lwekhabhathi luvala kwaye lujikelezisa isitshixo socango.Ngeli xesha, utshintshi oluphambili luvala kwaye luvalwe.Imela yokumisa ivuliwe kwaye imela yokumisa ingavuleka.
Umtshini oyintloko unokuvulwa kuphela emva kokuba kuvulwe ummese wokumisa kwaye ukuvalelwa komtshini oyintloko kukhutshwa.
Emva kokuba umtshini oyintloko uvale, i-knife yokumisa ivala kunye neebhloko, umnyango wekhabhinethi uvaliwe, kwaye i-lock door lock ayikwazi ukuhanjiswa.
Ngethuba nje utshintshi oluphambili lucinyiwe, i-grounding cutter inokuvula kwaye i-baffle yokhuseleko ivaliwe.
Kuphela xa imela yokumisa ivala ivala indawo yokuvala umnyango kwaye ucango lwekhabhinethi luvulwe.
Ummese womhlaba kufuneka uvalwe xa i-fuse idinga ukutshintshwa emva kokuba i-fuse pin iqhutywe.
Xa kungekho mese yokumisa, ukuvulwa kunye nokuvala ukusebenza kwe-baffle yokhuseleko kusaqhutywa ngokwendlela yokusebenza ngommese wokumisa, kunye nokulandelelana okudibeneyo kuyasebenza.
Ulwakhiwo lwangaphakathi oluyilwe ngononophelo lwesitshixo sokutshintsha lwenza ukuba i-interlock ithembeke.
Kwikhabhinethi yekhebula, ngokweemfuno zomsebenzisi, xa umgca ufakwe umbane, isitshixo se-electromagnetic singasetyenziselwa ukulawula umnyango wekhabhinethi, okanye i-padlock ingasetyenziselwa ukulawula ukuvulwa komnyango wekhabhinethi.
Xa ibholiti isusiwe kwaye ivulelwa umnyango wekhabhathi, kukho umqobo we-plexiglass kunye nophawu lokuthintela kuyo.
Isiphelo esisezantsi sekhabhinethi sidibaniswe nomqolo okhethekileyo wokumisa ukuze kuqinisekiswe ukukhuselwa okuthembekileyo nokukhuselekileyo komhlaba.
Ukutshintsha kuqhagamshelwe kunye ne-insulators ephilayo yokubonisa kunye nababambeli ngemivalo yobhedu.
Zonke iingcango zekhabhathi zixhotyiswe ngomboniso ophilayo.Iiphaneli zokuvula iingcango zinokusebenza kuphela ukuba akukho mboniso wombane uqinisekisiweyo.
Isibane se-incandescent sifakwe kwipaneli yangaphakathi yomnyango wekhabhinethi yokukhanyisa kunye nomsebenzi wobungqina bomswakama kwikhabhinethi.
Ilinganiswe rhoqo 50Hz
Ikalwe ngoku 630A Kuxhomekeke kwingundoqo
I-Fuse ephezulu ireyithwe ngoku - 100A
Umlinganiselo wokunyamezela kwexesha elifutshane (uzinzo lwe-thermal) yangoku (RMS) Ukutshintshela ukulayisha 20A/4s -
Ukutshintshela umhlaba 20kA/4s
Uchaso oluphambili lwesekethe ≤120μΩ
Ireyithwe Umthwalo osebenzayo wokwaphula yangoku 630A
Ilinganiswe ngokucinywa kwelophu evaliweyo 630A
Ukutshaja kweCable yangoku 10A
Ilinganiswe kwisekethe emfutshane yokuvala yangoku 50kA -
Udluliselo olulinganisiweyo lwangoku - 1000A
Ilinganiswe kwisekethe emfutshane yokwaphulwa kwangoku - 31.5kA
I-Frequency yaMandla ixesha elifutshane loNyamezelo lweVoltage (1min) Ngokufanelekileyo nangexesha 42kV
Ukwaphuka okwadwa 48kV
Ukothuka kombane ukumelana nombane Ngokufanelekileyo nangexesha 75kV
Ukwaphuka okwadwa 85kV
Ubomi bomatshini 2000 izahlulo
Inqanaba lokhuseleko IP3X
Imilinganiselo yangaphandle (ikhabhathi yokutshintshela ngaphakathi nangaphandle) ububanzi x ubunzulu x ukuphakama 400x900x2000 (1700)
Ngaphambili: Umgangatho ophezulu we-XGN15-12 Uhlobo lweBhokisi eZinzileyo ye-AC yentsimbi evaliweyo yeSulfur Hexafluoride Loop Switchgear Factory
Okulandelayo: Customized GCK(L) Low Voltage Drawer Switchgear Factory Price-shengte